Ministry issues health guideline for hotels and motels | Myanmar Business Today
HomeBusinessMinistry issues health guideline for hotels and motels
Written by Lin Thit
The Ministry of Hotels and Tourism has issued health guidelines for hotels and motels, which are not currently used as quarantine facilities, as the country aims to open its tourism industry with domestic tourism.
The guidelines include requiring hotels and guesthouses not to let guests stay in the establishment if he or she started to show the COVID-19 symptoms and temporarily isolate the suspected patients inaroom until health authorities arrive.
Moreover, the guidelines also require hotels and motels to provide information such as preventive measures of the COVID-19, and contact and locations of hospitals and clinics at the reception as well as registering guests with fever and informing the local health authorities.
Furthermore, it also suggests to use standardize disinfection when disinfecting water in the pool and use the required temperature when washing dishes and clothing, and the right amount of proportion for cleansing and disinfection liquid.
Restaurants, bars, and public restrooms are also required to place hand sanitizer, hand dryer, and paper tissue.
The buffet restaurants are no longer allowed to let customers pick their food; instead, restaurants staffs will need to serve the foods. Moreover, they need to frequently clean the surface with alcohol and train the staff to take the temperature of customers.
The staffs need to stay six feet away from each other, avoid touching eyes, nose and mouth and stay at home to receive medical care if he or she feels symptoms of the COVID-19.
Quarantine စင်တာအဖြစ် အသုံးမပြုသည့် ဟိုတယ်၊ မိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများဖွင့်လှစ်မည်ဆိုပါက သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာ၍ ဖွင့်လှစ်ရန် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
လာရောက်တည်းခိုသည့် ဧည့်သည်တွင် ရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆက်လက်တည်းခိုခွင့်မပြုရန်၊ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနမှ လာရောက်သည့်အထိ အခန်းတစ်ခုတွင် သီးသန့်ယာယီထားရှိရန် သံသယလူနာကို လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့ရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဟိုတယ်၊ မိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်ဆိုပါက ဧည့်လက်ခံကြိုဆိုရေး ဌာနတွင် Covid 19နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်း၊ ဆေးဆိုင် နေရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်း၊ ဧည့်သည်တစ်ဉီးမှ နာမကျန်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့ အကြောင်းကြားနိုင်ရန် ဖုန်းနံပတ်များ ထားရှိခြင်း၊ နေမကောင်းသည့် ဧည့်သည်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိ၍ လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးသည့် ဌာနများသို့ သတင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် သုံးရေနှင့် ရေကူးကန်အတွင်းရှိ ရေများကို ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတွင် နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပန်းကန်ဆေးရန်နှင့် လျော်ဖွပ်ရန် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ အပူအချိန်၊ အသုံးပြုရမည့် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပိုးသတ်ဆေးရည်များ၏ ပမာဏများ မှန်ကန်မှုများရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ဧည့်သည်များ၊ ၀န်ထမ်းများ အသုံးပြုမည့် စားသောက်ဆိုင်၊ ဘာများ၊ အများသုံးအိမ်သာများတွင် လက်သန့်ဆေးရေ၊
လက်အခြောက်ခံစက်နှင့် တစ်ခါသုံးတစ်ရှူးဘူးများကို ထားရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုယ်တိုင်ယူစနစ်(ဘူဖေး) အစားအစာများကို ဆိုင်၀န်ထမ်းမှသာ ၀န်ဆောင်မှုပေးရန်၊ စားပွဲမျက်နှာပြင်များ၊ ဧည့်သည်လက်နှင့် ထိတွေ့နိုင်သည့် အများသုံး ပစ္စည်းများကို အရက်ပြန်ဖြင့် မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်၊ ဧည့်သည်များကို ကိုယ်ပူချိန် တိုင်းတာနိုင်ရန်အတွက် ၀န်ထမ်းများကို ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းတာခြင်းကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင့်ကြားပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တာ၀န်ထမ်းဆောင်မည့် ၀န်ထမ်းတိုင်း လက်ဆေးရန်၊ ၀န်ထမ်းအချင်းချင်း ခြောက်ပေအကွာ နေထိုင်ရန်၊ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်တို့ကို ကိုင်တွယ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြည်ရန်၊ နှာချေချောင်းဆိုသည့်အခါတိုင်း လိုက်နာရမည့် ကျင့်၀တ်များကိုလိုက်နာရန်နှင့် သံသယလက္ခဏာများ ခံစားရပါက နေအိမ်တွင် နေထိုင်၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုခံယူခြင်း အစရှိသည့် အချက်များကို လိုက်နာရန် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာနမှ ယခုလဆန်းပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Previous articleThree countries want to buy rice from Myanmar
Next articleSugarcane plantation area likely to drop by 100,000 acres